သူ့မှာ အိတ်ကြီးနှစ်လုံးရှိတယ်။ အဲဒီအိတ်နှစ်လုံးကို သူကျောမှာထမ်းပြီးသွားနေရတယ်။ ပြက္ခဒိန်ထဲမှာ ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေကြွေသွားတိုင်း ပိုပြီးလေးလေးလာတာကို သူသိနေတယ်။ မြို့တစ်မြို့ကို ကျော်လာပြီးတိုင်း လူတွေက သူ့အိတ်ထဲကို ဘာမှန်းမသိတဲ့အရာတွေ ထည့်ထည့်ပေးတတ်တယ်။ သူဒီခရီးကို စထွက်လာစဉ်က သူ့အိတ်တွေထဲမှာ မရှိခြင်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ခုတော့ သူ့အိတ်ထဲမှာ မရှိခြင်းကလွဲရင် အရာအားလုံးရှိတယ်။ အိပ်မက်တွေရှိတယ်။ ပန်းတိုင်တွေရှိတယ်။ သော့ခတ်ထားတဲ့ ဘ၀တစ်ချို့ရှိတယ်။ စတေးထားတဲ့ ဘ၀တစ်ချို့ရှိတယ်။ နာရီလက်တံတွေနဲ့အတူ သူခရီးသွားနေတယ်။ ရက်စွဲတစ်ခုကို စားသုံးလိုက်တိုင်းမှာ တစ်ချို့ကို သူသော့ခတ်ထားခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ကို သူစတေးသွားခဲ့တယ်။ အိပ်မက်တွေက ပိုပိုလေးလာတယ်။ ပန်းတိုင်တွေက ပိုပိုမြင့်လာတယ်။
သူ့အိတ်ထဲက အရာတွေက သူ့အတွက် အသုံးဝင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အိပ်မက်တစ်ချို့ကိုထုတ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ အားဖြည့်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လမ်းပျောက်နေရင် ပန်းတိုင်တစ်ချို့ကိုထုတ်ကြည့်ပြီး ခရီးဆက်တယ်။ တစ်ချို့တွေရဲ့ အထင်သေးတဲ့ အကြည့်တွေကို သူစတေးခဲ့တဲ့အရာတွေထုတ်ပြပြီး ချေမှုန်းနိုင်တယ်။ နာရီလက်တံတွေနဲ့အတူ သူခရီးဆက်နေတယ်။ ပြက္ခဒိန်တစ်ရွက်ကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်တိုင်းမှာ အိတ်နှစ်လုံးကလည်း တစ်ဖြေးဖြေး လေးလံလာတယ်။
သူ့ခရီးလမ်း တစ်နေရာအရောက်မှာ မမျှော်လင့်တာတစ်ခု ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူ့အိတ်နှစ်လုံးထဲက တစ်လုံးကိုပဲသယ်ခွင့်ရှိတော့မယ်တဲ့။ သူဘယ်လို ဆုံးဖြတ်မလဲ။ နှစ်ခုလုံးက သူ့အတွက် အရေးကြီးနေတယ်။ အိတ်တစ်လုံးထဲမှာ အိပ်မက်တွေ ပန်းတိုင်တွေ ထည့်ထားတယ်။ ဒီအိတ်ကိုထားခဲ့ရင် သူလိုရာခရီးကို စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ ဆက်သွားရမယ်။ နောက်အိတ်တစ်လုံးထဲမှာက သူသော့ခတ်ထားတဲ့ သူ့ဘ၀တစ်ချို့ပါတယ်။ စတေးထားတဲ့ သူ့ဘ၀တစ်ချို့ပါတယ်။ ဒါတွေကို ထားခဲ့ရင် အထင်သေးမှုတွေကို သူတော်လှန်နိုင်စွမ်းမရှိ။ လူတွေကြားထဲမှာ လူရာဝင်နိုင်ဖို့ မလွယ်။
နောက်ဆုံး သူတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ သူသွားလိုရာခရီးအတွက် အရေးပါဆုံးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ သူခရီးဆက်သွားတယ်။
Technorati: essay, thoughts
ရေးသားသူ Wai Yan ရေးသားသောအချိန် 1:51 AM
Be careful with your laptop bag. Don't allow other people to put viruses into it!
ဟုတ်ကဲ့။ ခုတော့ ဗိုင်းရပ်စ် တွေက ခေါင်းထဲရောက်တော့မယ်။